Ao amin'ny ranomasina tsy misy fotona, taratra ny masoandro afovoany sy ara-panahy ary tsy hita maso. Izao rehetra izao dia ny vatany, ny fanahiny ary ny fanahiny; ary aorian'io modely mety io dia namboarina REHETRA TSARA. Ireto emanations telo ireto dia ny fiainana telo, ny ambaratonga telo an'ny Pléroma gnostic, ny telo "tarehy Kabalistic", ho an'ny ANATISIKA taloha, ny masin'ny taloha, ny En-Soph lehibe, dia manana endrika iray "ary avy eo izy dia manana. tsy misy endrika. ”
Vol. 1 NOVAMBRA, 1904. Tsia
Copyright, 1904, avy amin'ny HW PERCIVAL.
IZAY tena mila fitomboana gazety iray ireo pejy izay hisokatra amin'ny famelabelarana maimaim-poana sy tsy manavakavaka momba ny filozofia, ny siansa ary ny fivavahana, miorina amin'ny etika. Ny WORD dia natao hanomezana izany filana izany. Ny etika dia miorina amin'ny firahalahiana.
Anjarantsika ny hanome toerana ho an'ny lahatsoratra voasoratra hanamafisana ny hetsika rehetra raha toa ka ny tanjona voalohany dia ny miasa ho an'ny zanak'olombelona.
Ny maha-olona dia fianakaviana iray lehibe, na izany aza dia manasaraka ny firazanana amin'ny firazanana sy ny fankatoavany. Izahay dia manana finoana matanjaka amin'ny hevitra izay tsy voafaritry ny teny hoe "firahalahiana." Ny famarinan'io teny io dia voafetra ho an'ny olona tsirairay, amin'ny alàlan'ny faniriany, fironana, fanabeazana ary fivoarana. Misy fiheverana lehibe momba ny dikan'ny teny hoe firahalahiana toa misy ifandraisany amin'ny dikan'ny teny Fahamarinana. Ho an'ny ankizy kely iray, ny teny hoe "rahalahy" dia mitondra ilay eritreritra hoe fanampiana sy fiarovana avy amin'ny olona iray izay afaka miaro azy amin'ny fahavalony. Midika amin'ny zokiny fa misy olona harovany. Ho an'ny mpikamban'ny fiangonana iray, ao amin'ny fiarahamonin'ny tsiambaratelo na fikambanana iray, dia manondro mpikambana izy. Mampifandray azy amin'ny fiaraha-miasa na fiaraha-miasa eo amin'ny lafiny ara-toekarena ny sosialisista.
Nahatsapa ho nofo sy nohajambain'ireo fahatsapana fahatsapana ao anaty tontolo mikotrokotroka, ny fanahy dia tsy mahatsapa ny tena toerany ao amin'ny fanahiny.
Ny firahalahiana dia ny fifandraisana tsy misy ifandraisany eo amin'ny fanahy sy ny fanahy. Ny fiainana rehetra dia mirona mampianatra ny fanahy io fahamarinana io. Aorian'ny fandalinana lavitra sy ny faniriana mitohy, dia misy fotoana hahatakarana ny firahalahiana. Dia fantatry ny fanahy ho marina izany. Tonga toy ny tselatra amin'ny hazavana izany. Ny tselatra misy hazavana dia tonga amin'ny tsirairay amin'ny fotoana sasany eo amin'ny fiainana, toy ny fifandraisana voalohany amin'ny fanahy amin'ny vatany, ny fifohazana amin'ny fahatsiarovan-tena eto an-tany toy ny zaza, ary amin'ny fotoana hahafatesany. Tonga ny tselatra, mandeha, ary hadino.
Misy dingana roa amin'ny hazavana izay miavaka amin'ny etsy ambony, jiro ny hazavana mandritra ny maha-reny, ary ny taratry ny Rahalahy maha-olombelona. Fantatsika fa ny volana maro ny fanaintainana sy ny tebiteby sy ny alahelo, izay mialoha ny fahaterahan'ny zaza, dia manafana ny fahatsapana ny "reny". Amin'ny fotoana itomian'ny voalohany ny zaza vao teraka, ary amin'ny fotoana hahatsapany fa handeha ny fiainany, dia misy zava-miafina iray nambara tamin'ny fon'ny "reny". Hitany eo am-bavahadin'ny Fiainana lehibe kokoa, ary vetivety monja dia nisy fahatsapana faingana, onjam-pahazavana, tontolon'ny fahalalana, ary nanambara taminy ny fisian'ny firaisan-kina amin'ny olona iray hafa. na dia ny tenany aza mbola tsy izy. Amin'ity indray mitoraka ity dia misy fahatsapana hafanam-po, fahatsapana firaisan-tsaina, ary fifamatorana tsy mifangaro eo amin'ny olona iray. Izy no fanehoana tonga lafatra indrindra amin'ny tsy fitiavan-tena, ny firahalahiana, ny fitiavana, izay ananantsika eo amin'ny fiainantsika olombelona. Nandalo ny tselatra ary hadino. Ny fitiavana, mazàna, dia mihena tsy ho eo amin'ny maha-reny isan'andro ary milentika amin'ny fitiavan-tena amin'ny reny.
Misy fitoviana eo amin'ny fahalalana ny fifandraisan'ny zaza amin'ny reniny, ary ny fifandraisan'ny lehilahy roa lahy nateraky ny Atman na Universal Self. Mahatsapa ny reny sy ny fitiavana ny zanany ny renim-pianakaviana satria, mandritra io fotoana miafina io, ny varavaran'ny fiainana dia misintona ary misy fivoriana, fifankahazoana, eo anelanelan'ny fanahin'ny reny sy ny fanahin'ny zanaka, ny iray hotandremina sy harovany, ary ny sasany tokony harovana.
Ny neophyte, amin'ny alalan'ny faniriana sy faniriana ny fahazavana ara-panahy, amin'ny farany dia tonga amin'ny fotoana izay hilentehan'ny jiro. Tonga amin'ny tanjona izy rehefa afaka andro maro teto an-tany, taorian'ny fiainam-piainana maro tamin'ny lafiny rehetra, toe-javatra, toe-javatra, niaraka tamin'ny olona maro , any amin'ny firenena maro, mandritra ny fihodinana maro. Rehefa nandia ny zava-drehetra izy dia takany ny toetra sy ny fangoraham-po, ny fifaliana sy ny tahotra, ny faniriana sy faniriana ny mpiara-belona aminy - izay olom-pantany hafa. Misy teraka ao amin'ny tontolony ho fahatsiarovan-tena vaovao: ny fahatsiarovan-tena firahalahiana. Namoha ny fony ny feon'ny zanak'olombelona. Ny feo dia toa ny tarainan'ilay zaza vao teraka tamin'ny sofin'ny “reniny”. Mbola betsaka: misy fifandraisana roa manana traikefa. Tsapany ny fifandraisany amin'ny fanahin'ny ray aman-dreny lehibe toy ny zanaka amin'ny ray aman-dreniny. Mahatsapa faniriana hiaro sy hiaro koa izy, toa ny reny hiaro ny zanany. Tsy misy teny hiresaka an'izany fahatsiarovan-tena izany. Miharihary izao tontolo izao. Ny fahatsiarovan-tena momba ny Universal Universal dia mifoha amin'izany. Rahalahy izy. Teraka roa taona izy, tera-bavy roa.
Raha ny fifohazan'ny zaza ao anaty renim-pianakaviana dia fiainana vaovao, toy izany koa ny lehilahy izay velomina dia fiainana vaovao misokatra. Tamin'ny tabataban'ny tsena, any an-kianjan'ny efitra tsy misy volana, na rehefa irery ny fisaintsainana lalina dia maheno ny fitarainan'ny olombelona Orphan lehibe.
Ity antso ity dia misokatra ho azy fiainana vaovao, adidy vaovao, andraikitra vaovao. Tahaka ny zanaka amin'ny reniny dia toy ny zanak'olombelona aminy ihany koa. Mandre ny fitarainany izy ary mahatsapa fa lasa ny fiainany. Tsy misy zavatra hahafa-po azy afa-tsy ny fiainana natolotra ho soa ny zanak'olombelona. Maniry hanome izany izy amin'ny maha ray, hamelona azy toy ny reny, hiaro azy ho toy ny rahalahy.
Mbola tsy tonga saina tanteraka amin'ny maha-mpirahalahy azy ny olombelona, ​​fa mety farafaharatsiny hanombatombana izany momba izany izy, ary hanomboka hampihatra ireo teôria-ny.